Peixin dia nandray anjara tamin'ny Non Woven Tech Asia 2019 tany Delhi, India
Nanomboka ny faha-6 jona ka hatramin'ny 8 jona, ny Non Woven Tech Asia Fair dia natao tao Delhi. Amin'ny maha-mpamatsy iray matihanina indrindra azy, ny Vondrona PEIXIN dia lasa malaza kokoa. Faly be izahay satria nahazo fijinjana lehibe. Betsaka ny olona mahafantatra momba antsika ary mampiseho fahalianana amin'ny milina. Ary ny ...
Nanomboka ny 28 jona ka hatramin'ny 29 jona, dia natao tao Mumbai ny Techno Tex India Fair. Amin'ny maha-mpamatsy iray matihanina indrindra azy, ny Vondrona PEIXIN dia lasa malaza kokoa. Faly be izahay satria nahazo fijinjana lehibe. Betsaka ny olona mahafantatra momba antsika ary mampiseho fahalianana amin'ny milina. Ary ny mpanohana anao ...
Peixin dia nandray anjara tamin'ny ANDTEX 2019 tany Bangkok, Thailand
ANDTEX 2019 ny hetsika izay nanangona mpamokatra, mpikaroka, mpampiasa ary mpitarika ny indostria avy maneran-tany mba hivory hitrandraka ny haren'ny tombontsoa vaovao ho an'ny olona tsy misy sy ny vokatra fidiovana any Azia Atsimo Atsinanana. Azia Atsimo Atsinanana ny 1 ...
Peixin dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana IDEA 2019 Non woven any Miami USA
IDEA® 2019, hetsika manerantany ho an'ny matihanina tsy matihanina sy matihanina, dia niarahaba ireo mpandray anjara 6 500+ ary orinasa 509 nampiranty orinasa avy amin'ny firenena 75 manerana ny firenena tsy misy sy ny roalahy vita amin'ny milina nanamboatra orinasa mifandray amin'ny orinasam-pifandraisana tamin'ny herinandro lasa tany Miami Beach, FL. Ny 2 ...
Peixin dia nandray anjara tamin'ny NON WOVEN EXPO BANGLADESH
Nanomboka ny faha-27 janoary ka hatramin’ny 29 jona, dia tontosa tao Dhaka ny NON WOVEN EXPO Fair. Amin'ny maha-mpamatsy iray matihanina indrindra azy, ny Vondrona PEIXIN dia lasa malaza kokoa. Faly be izahay satria nahazo fijinjana lehibe. Betsaka ny olona mahafantatra momba antsika ary mampiseho fahalianana amin'ny milina. Ary ny fanohananao w ...
NY TEKNOTEX INDIA Fair
amin'ny admin amin'ny 19-11-28
Nanomboka tamin'ny 17 janoary ka hatramin'ny 19 Jan, dia natao tao New Delhi ny Techno Tex India Fair. Amin'ny maha-mpamatsy iray matihanina indrindra azy, ny Vondrona PEIXIN dia lasa malaza kokoa. Faly be izahay satria nahazo fijinjana lehibe. Betsaka ny olona mahafantatra momba antsika ary mampiseho fahalianana amin'ny milina. Ary ny maha-...
Ny laharana faha-113 sy ny fanondranana entana Shinoa
Misaotra ny mpanjifa rehetra mandany ny fotoanany sy mitsidika ny trano fandraisam-bahiny eto aminay, voninahitra lehibe ho antsika rehetra ireena. Ho iray amin'ireo zavatra niainana tsy hay hadino indrindra, nanatrika ny tsenam-barotra faha-113 sy China Export Trade Center izahay tamin'ny daty faha-15 ka hatramin'ny 19 aprily 2013, ny lazan'i Canton Fair dia ...
The Conference Engineered Fabric Conference & Expo any Etazonia
Nandritra ny 23 aprily ka hatramin'ny 25 aprily, dia nanatrika ny fihaonambe International Engineered Fabric Conference & Expo In Miami, USA.Thanks ho an'ity lanonana ity dia nodinihintsika ny tsenan'ny American Market.Morefa ary betsaka ny mpanjifa amerikana mahalala ny marika PEIXIN. Izahay dia mirehareha milaza ny varotra miaraka amin'ny RP ...
Ny Tekanaly Teknolojia Teknolojia sy tsy ara-barotra Nonwoven
Ny Istanbul Teknolojia Teknolojia sy ny varotra tsy an'olon-droa natao tamin'ny 29 May, 1 aogositra ka hatramin'ny 1 jona - 2013 no notanterahina tamim-pahombiazana tao Istanbul, Turkey. Feno fankasitrahana tokoa izahay noho ny fanohanana avy amin'ireo mpanjifa sarobidy izay nitsidika ny trano fandraisantsika tamin'ny fampirantiana. Ary ny fanohanan'izy ireo dia nahatonga ny fampirantiana nahatratra ny g ...
ВУа в в ффр《《 《《《《《 И《И -》》》》》》》》 》》》》》》》 2016》 2016 2016 2016 2016 2016.-11》
amin'ny admin amin'ny 19-11-27
Ny andiany faha-25 amin'ny fiainana iraisam-pirenena fampirantiana siantifika sy teknolojia sy fihaonambe
Ny andiany faha-25 ny haino aman-jery iraisam-pirenena momba ny haino aman-jery sy ny teknolojia (taona 2018 manentana ny fihaonana isan-taona sy ny fidirana amin'ny fiainam-pianakaviana, ny fampirantiana vokatra momba ny fahasalamana efa zokiolona), tohanan'ny vondron-tsoratry ny komity mpikarakara ny asa vaventy isan-tsokajiny, ...
Daily fidiovana Machine , mando mamafa Machine , Mini pad Production-dalana , Panty Liner Production-dalana , Lady pad Machine , Mirosoa Up Machine .